‘मान्छेको मन आफैंमा समस्याको स्रोत हो'
भगवान श्रीकृष्णले मान्छेको मन नै बन्धन र मुक्तिको कारण हो भनेर गितामा भन्न्भएको छ । यदि मनलाई जित्न सकियो भने नियन्त्रणमा राखिएको हात्ती झैं मन पनि मानिसको काममा आउँछ । मन यदि आफ्नो नियन्त्रणबाट फुत्कियो भने जंगली हात्तीले झैं सब विनास गर्छ । महात्मा गान्धीले यही कुरालाई ‘हृदय परिवर्तन’ भन्नुभयो । गान्धीले ‘हृदय परिवर्तन मात्रै मानव मुक्तिको द्वार हो’ भनेर भन्नुभयो । गान्धी भनेको राजनीतिक मान्छे होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नसक्नुहुन्थ्यो, तर बन्नुभएन ।
भगवान श्रीकृष्णले मान्छेको मन नै बन्धन र मुक्तिको कारण हो भनेर गितामा भन्न्भएको छ । यदि मनलाई जित्न सकियो भने नियन्त्रणमा राखिएको हात्ती झैं मन पनि मानिसको काममा आउँछ । मन यदि आफ्नो नियन्त्रणबाट फुत्कियो भने जंगली हात्तीले झैं सब विनास गर्छ । महात्मा गान्धीले यही कुरालाई ‘हृदय परिवर्तन’ भन्नुभयो । गान्धीले ‘हृदय परिवर्तन मात्रै मानव मुक्तिको द्वार हो’ भनेर भन्नुभयो । गान्धी भनेको राजनीतिक मान्छे होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नसक्नुहुन्थ्यो, तर बन्नुभएन । ‘राजनीति नै मान्छेको समस्याको समाधान होइन, समाधान भनेको हृदय परिवर्तन मात्र हो’ भनेर उहाँ अडिएर बस्नुभयो । त्यही कुरालाई हामीले एक्काइसौं शताब्दीमा आएर ‘मनोक्रान्ति’ भन्यौं ।
नेपालमा कुनैबेला चारैतिर क्रान्तिकै कुरा मात्र चलिरहेको थियो । क्रान्ति चाहियो, क्रान्ति चाहियो भनिन्थ्यो । कम्युनिष्टहरु सबै क्रान्तिकै कुरा गर्थे । कोही राजनीतिक क्रान्तिको कुरा गर्थे, कोही आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्थे । हामीले मनोक्रान्ति भन्यौं । हाम्रो भनाई के थियो भने बाहिरको क्रान्ति भनेको एकतर्फी हुन्छ, सबैभन्दा पहिले त मनकै क्रान्ति चाहिन्छ । अनि हामीले भन्यौं, ‘संसार बदल्नु छ भने पहिला आफंैलाई बदल अर्थात् मनोक्रान्ति गर ।’ हामीले यसरी मनोक्रान्तिका कुरा गरेका हौं । तर यी सबैको सार भनेको शास्वत सत्य नै हो, जुन हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोली पनि रहनेछ ।
खासमा यो ‘मन’ भन्ने चिज आफंैमा के हो ?
अब बिजारोपण हुनुअघिको कालखण्डमा जाउँ । जन्मनुअघि कहाँ थियौं भन्ने कुरा त थाहा छ, हामी गर्भमा थियौं । गर्भमा आउनुअघि कहाँ थियौं त रु गर्भमा आउनुअघि बाबुको शुक्रकीटमा थियौं । त्यहाँभन्दा अघि कहाँ थियौं त रु त्यसअघि भाइब्रेसनका रुपमा, चेतनाका रुपमा, आत्माका रुपमा हामी ‘साइबर स्पेश’मा थियौं । अनन्त आकाशमा थियौं । जोइपोइको बीचमा सहबास भएर शुक्रकिटले डिम्बलाई निशेचन गरेपछि बल्ल ब्रेन ९मष्तिष्क०को बिकास हुन्छ । मष्तिष्कको बिकास भएपछि त्यसलाई चलाउनका लागि साइबर स्पेशबाट चेतनाको डाउनलोड हुन्छ । हामीले कम्प्युटरको किबोर्डमा ‘टाकटुक टाकटुक ट्याक’ गरेर इन्टरनेटबाट कुनै सामग्री डाउनलोड गरे झैं हाम्रा बाबु आमाले पनि ‘टाकटुक टाकटुक ट्याक’ गरेर हामीलाई साइबरस्पेशबाट धर्तीमा डाउनलोड गर्नुहुन्छ । डाउनलोडपछि जब हाम्रो जन्म हुन्छ, तब हामी ‘पब्लीस्ड’ हुन्छौं । एक दिन हाम्रो शरीर मर्छ, अर्थात ‘रिमुभ’ हुन्छ, तर हाम्रो चेतना अनि हामीले जीवनभर भोगेका सबै दुःख सुख ‘अपलोड’ हुन्छ र फेरि साइबर स्पेशमा गएर बस्छ । फेरि कुनै दिन कुनै बाबु आमाले ‘टाकटुक टाकटुक ट्याक’ गरेर हामीलाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ । डाउनलोड र अपलोडको क्रम चलिरहन्छ । हाम्रा ती जन्म जन्मान्तरका सारा अनुभवहरुको संग्रह नै मन हो । मनलाई बिचारले अभिव्यक्ति दिन्छ ।
मन कहाँनेर हुन्छ रु मष्तिष्कमा हुन्छ की मुटुमा हुन्छ ?
मष्तिष्कका कोषहरुलाई न्यूरोन भनिन्छ । मष्तिष्कमा बायाँ मष्तिष्क र दायाँ मष्तिष्क हुन्छन् । सन् १९८१ मा स्नायुविज्ञ डा। रोजर स्पेरीले ब्रेनकै विषयमा नोबेल पुरस्कार पाएका थिए । उनले पहिलो पटक के पत्ता लगाए भने दायाँ मष्तिष्क भावप्रधान हुन्छ । जस अन्तर्गत कल्पना, सपना, प्रेम, घृणा आदि पर्छन् । बायाँमा मष्तिष्क चाहीं बिचार प्रधान हुन्छ, बुद्धि, लजीक, तर्क आदि । हामीले जसलाई मष्तिष्क भन्यौं, त्यो खासमा बायाँ मष्तिष्क रहेछ–लजीकल माइन्ड । जसलाई हामीले हृदय भन्यौं, त्यो चाहीं दायाँ मष्तिष्क हो, जसमा भावनाहरु रेकर्ड हुन्छन् ।
यो त डा। रोजर स्पेरीको खोज भयो । अर्को रिसर्चले के पत्ता लगाएको छ भने हाम्रो मुटुमा पनि ब्रेनका केही सेल्स ९न्यूरोन० आएर बसेका हुन्छन् । मुटुमा ब्रेनका त्यस्तै चालिस हजार कोषहरु हुन्छन् । मुटुभित्र पनि ब्रेनका सेल्सहरु भएकाले मष्तिष्कले सोच्दा मुटुले पनि सोच्नसक्छ ।
किनकी मन आफंैमा समस्या हो । किनकी मन म हैन, मन मेरो अनुभव हो । मेरो अनुभव र म एउटै त हुन्न नि । मैले चढ्ने गाडी र म एउटै हैन नि । मन आफंैमा समस्या हो, किनकी यसले कहिल्यै सुख, शान्ति र आनन्द दिँदैन । कलाकार अमिताभ बच्चनलाई एक पत्रकारले सोधे, ‘तपार्इं शताब्दिकै महानायक हुनुहुन्छ, कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ रु’ अमिताभ बच्चनले पिता हरिवंश राय बच्चनको भनाई उदृत गर्दै आफ्नै फिल्मी स्टाइलमा भने, ‘सन्तुष्ट भनेको साधु सन्त मात्रै हुन्छन्, म साधु सन्त हैन।’
मन भनेको अमिताभ बच्चन भएर पनि सन्तुष्ट हुँदैन । मनको स्वभाव नै असन्तुष्टी हो । तर यो मनको खराबी हैन । मनको असन्तुष्टीलाई बजारमा बजार्ने हो भने त्यो विज्ञान, कला, साहित्य र संगीत बन्छ । मनको असन्तुष्टीलाई आफूमा बजा¥यौं भने डिप्रेसन, फ्रस्टेशन, कन्फ्युजन हुन्छ । मनको एउटै मात्र औचित्य र उपादेयता भनेको संसार निर्माण गर्नु । आफ्नो लागि मन शत्रु हुन्छ । त्यो बन्दुकजस्तो हुन्छ । अर्कालाई ताकेर हान्यो भने शिकार हुन्छ, आफूतिर ताक्यो भने आफंैलाई सिध्याउँछ । साहित्य, संगीत, कलामा मन चाहिन्छ । तर, आनन्द, प्रेम, करुणा र शान्तिमा मन बाधा हुन्छ । अरु त अरु निद्रामै मन बाधा हुन्छ । अतः मनबाट मुक्त हुनैपर्छ ।
तपाईं त लेखक मान्छे । हरेक प्याराग्राफमा दुई प्याराग्राफको वीचमा हामी सानो स्पेश छाड्छौं । एक पटक कल्पना गरौं, सबैको स्पेश हटाउने हो भने त्यहाँ शब्द रहला त रु गज्याङ मज्याङ हुन्छ । हामी मान्छेको सारा जीवन त्यस्तै भएको छ । शब्द त छ, तर स्पेश छैन । मानिसको होल लाइफ कन्फ्यूज्ड छ । शब्दको अर्थ स्पेशमा, त्यही शुन्यतामा छ । अनि त्यही शुन्यताको खोजी नै अध्यात्म हो । हामी शब्दको साटो स्पेशतिर मोडियौं भने मनबाट पनि मुक्त हुन्छौं ।
सरल पत्रिका आर्काईभबाट ।
२०७४ चैत १ बिहीबार ११:००:०० मा प्रकाशित